Neymar Storyhood Story Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Brazil Neymar Storyhood Story Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Cusboonaysiinta ugu dambeysay Waxaa laga yaabaa 24, 2020
Xaqiiqooyinka Biyo-Weyn ee Neymar ayaa soo bandhigaya warbixin buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Carruurnimada, Nolosha Hore, waalidiinta, Xaqiiqda Qoyska, Xaaska, Carruurta, Nolosha Qofka iyo Noloshaada. Runtu waxay tahay, waxaan kuusoo bandhigaynaa falanqeyn buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Nololeed, laga bilaabo laga soo bilaabo Maalmihii Hore ee Neymar illaa markii uu guuleystay.
Haa, qof walba wuu ogyahay xirfadihiisa indhaha iyo taxane ah ee loogu tartamayo Ballon d'Or. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa wax badan ka ogaanaya Neymar Jr's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Sheekada Caruurnimada Neymar:
Neymar da Silva Santos Júnior wuxuu ku dhashay 5th of February 1992 ee Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil. Waxa uu ku dhashay aabihii, Neymar Santos Sr (ka dibna kubadda cagta) iyo hooyadiis, Nadine Santos.
Marki lagu jiray da'da afar bilood, Neymar waxa uu ka badbaaday shil baabuur oo dhimasho ah. Shil gaari oo geeriyooday waxaa sababay gaari soo socda oo si khalad ah u soo cararay baabuurkiisa qoyskiisa intii ay u socdeen si ay u soo booqdaan qaraabada qaarkood.
Nasiib wanaag, Baby Neymar oo lagu hayo kursiga caruurta ee kursiga dambe ee gaariga ayaa ka badbaaday shilkii waxaana loo soo saaray muuqaal.
Neymar - Sannadaha Soo Koray:
Marka uu eego kubadda cagta maanta, way adkaan doontaa in la rumaysto inuusan marnaba caruurnimadiisii ​​hore. Xaqiiqdii, qoyskiisu waxay ahaayeen sabool beereed markii uu dhashay. Aabaheed, Neymar Sr waa inay shaqeeyaan shaqooyin badan si ay u sii wataan qoyskiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxay awoodeen inay u dabaaldegaan Neymar dhalashada kowaad.
Sidaasi darteed, markii Neymar uu ka mid ahaa da'diisa da'da yar (sawirka hoose), wuxuu ku qornaa iskuul kaas oo ku haboon. Dib ugu laabashada gurigeeda ka dib, qoyskiisu wax awood ah ma lahayn, sababtoo ah ma awoodi karaan inay sameeyaan, horumarka Neymar iyo walaashiisa da 'yar ayaa shumacyo ka dhigey midka kaliya ee iftiinka waxbarasho.
Inkastoo Neymar Sr uu ku dhibtooday taakulada qoyskiisa, wiilkiisa Neymar Jr ayaa helay isla markaana bilaabay inuu horumariyo xirfadiisa kubada cagta. Si ka duwan sida kuwa kale ee kubada cagta ah, kubada cagta Neymar kubadda cagta ayaa ka bilaabatay maxkamad kubbadda kolayga iyo maaha ciyaarta ciyaarta.
Wuxuu bartay inuu ciyaaro Futsal waxaana uu ku fiican yahay ciyaarta gudaha ah taas oo lagu gartey kubad kubad adag oo aan soo kabsanin. Iyadoo ay ugu wacan tahay qiyamka iyo xaddidaadda ciyaaraha oo lagu ciyaaray maxkamad kubadda kolayga, Neymar wuxuu awooday inuu barto lana horumariyo xirfadaha cajaa'ibka ah ee uu ku muujiyo maanta kubada cagta.
Waqtiga No, wuxuu noqday mid caan ah oo ka mid ah asxaabtiisa waddooyinka oo uu xirfadihiisa u qaaday. Neymar Sr. ayaa qiray xirfadaha uu wiilkoodu haysto, mararka qaarna wuxuu ka soo qaatay jadwalka uu ku mashquulsan yahay si uu ugu socdo Neymar oo hoos u dhiga jidka xirfadlaha.
Ku saabsan waaliddiinta Neymar:
Qaar badan, genetics of Neymar Jr ee waalidiinta waxay u baahan tahay taam u ah ilmo weyn oo wiil. Waxay ahaayeen labo tijaabo oo jilicsan oo jilicsan oo soo saaray kubad caan ah.
Neymar wuxuu caadi ahaan ka helaa dhunkashada laba jeer ka hor intaan la cunsuriyadeeynin iyo jidadkiisa. Jacaylku wuxuu ahaa mid aan waqti lahayn oo aan ogeyn xuduudiisa, waxa ay sii waday xitaa markii Neymar uu joogay Santos kooxdiisii ​​ugu horeysay ee xirfad ahaaneed (sawiran hoos).
Ka dib markuu dhunkasho ka dib, waalidkiis ayaa sida caadiga ah u sheegi lahaa;
... ''Waxaa laga yaabaa in aayaha iyo qaddiyadda ay ku siin karaan waalidiin ka fiican nagaaga. Laakiinse waxba ma uu siin kari waayay wiil yar oo adiga kaa wanaagsan. Waxaan kuu jecelnahay wiil, waxaad tahay qofka ugu fiican. Hadda. GO AND FINISH THEM ALL! "...
Taariikh Nololeedkii Neymar - Doorka Tababarka Tababaraha Santos:
Inkastoo Neymar uu weli joogay Santos, waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray dhacdada taasoo keentay in kabtanimada tababaraha kooxda, Dorival Junior. Dhacdadan ayaa bilaabatay markii Dorival Junior ay Neymar ka hor istaagtay inay rigoore ka dhigto. Neymar ayaa loo doortay ciyaartoy kale oo magac leh oo magaciisu yahay Marcel, oo horumar sameeyay. Markii uu kursiga keydka ku soo laabtay, wuxuu si qaldan u cambaareeyay go'aanka tababaraha ee kooxda isagoo sheegay inuu ku qasbay inuu xiro lineerka ganaaxa.
Neymar ayaa sidoo kale raaligelin ka bixiyay dabeecadiisii ​​xumaa, laakiin tababaraha ayaa doorbiday inuu ciqaab ka dhigo isagoo ka tagaya kooxda kooxda intii uu ku jiray line-upka kooxda Corinthians.
Guddiga agaasimaha kooxda ee Neymar ayaa ku faraxsan go'aanka Dorival Junior waxaana go'aansaday inuu ceyriyo. Daafaca Dorival ayaa cadeeyay in Neymar uusan aheyn kaliya ciyaaryahanka muhiimka ah ee kooxda, lakiin waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahan u dhashay Brazil.
"Dhibaatada" ayaa ah 4 saaxiibo dheer oo Neymar ah oo qalqal galiyay mustaqbalkiisa kubada cagta. Waxay qabtaan howlaha asaasiga ah ee asxaabtooda caanka ah oo ay ka mid yihiin codsiyada maaliyadeed ee miiska iyo joornaalada ka baxaya Neymar oo diirada saaraya garoonka dhexdiisa.
Sababta kuxirta Nickname:
Neymar ayaa loo yaqaan 'Lord of the Night' saaxiibadiisa kooxda Barca ee dhar gogol-xirka sababtoo ah xaqiiqda ah in uu ujoogo inuu ku raaxeysto nolosha, gaar ahaan marka ay timaado habeenkii "The Toiss".
Xiddiga reer Brazil ayaa jecel naaneyska kaas oo ah title for Batman. Waxa uu ka ciyaaray 'Halloween' xaflad ka tirsan 2015 markii uu u muuqday dharka maaskarada Batman oo la yidhaa Dracula.
Ka Qeybgalka Hooyo:
Inkastoo qaar kale ay qaataan gabadhooda saaxiibadood, Neymar wuu ka soo horjeeda. Wuxuu qaataa hooyo. Sida laga soo xigtay isaga,
"Hooyadu waxay maamushaa qoyska. Waa nooca qof, iyada oo aan iyada, waxaan lumin lahaa. Waxay na taageertaa. Waxaan helay meel u dhow hooyaday markii walaalaha ay ku jireen jaamacad, Dadkuna aad ayay u socdeen. "
Ku saabsan xaaska Neymar:
Markii uu da 'yar yahay ee 19, Neymar wuxuu la shaqeeyay gabadhiisa caruurnimada ah ee Carolina Dantas oo uur lahayd.
Waxay dhashay wiil kaas oo magacaabay 'Davvi Luca'. Neymar ayaa u istaagay iyada oo dhan iyada oo uur iyada iyo u sii iyada oo ka dib. Inkastoo qaar badan ay aaminsanyihiin in dhalashadii Davy Luca ay ku adkeyd xiriirkoodii, kaliya dhowr ciyaaryahan ayaa ogaaday in Neymar uu marwalba lahaa qalbiyo jecel iyo daryeel leh.
Ku saabsan wiilka Neymar:
Kubadsameeyaha reer Brazil ayaa aad u jeclaa wiilkiisa tan iyo dhalashadiisa. Qeyb muhiim ah oo ka mid ah isku soo dhawaashadiisa waxaa ka mid ah aabe iyo wiil qubeyska lagu ciyaaro.
Da'da 3, ayaa Davvi Luca horey loogu isticmaalay in lagu toogto cayaaraha kubada cagta ee aabihiis oo wax bara. Neymar ayaa qaatay tababarka Davvi Luca isagoo sii wata inuu isku qoro iskuulka kubada cagta Barcelona FCB Escola ee 2017,
Sanadaha Nooca Mohawk:
Neymar ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Brazil u dhashay si uu u sameeyo qaab ciyaareedka timaha ee Mohawk.
Neymar Mohawl Style Heerka Nidaamka Nidaamka Dharka
Xilligaan, taageerayaasha kubada cagta ee Brazil oo dhan ayaa sameeya qaabka timaha loo jarayo si ay u cadeeyaan geesigooda. Sidoo kale, waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee keliya ee Brazil ah oo lagu soo bandhigo dhinaca hore ee Magazine Time Magazine.
Neymar ayaa aad uga niyad jabay waxa ay ugu yeedheen "oo ah lacag aad u jaban FC Barcelona '. Neymar iyo kooxdiisa ayaa ku qanacsan yahiin 57 million Euros taas oo u aragtay inuu u dhaqaaqay FC Barcelona. Tani waxay u badan tahay in loo arko inay niyad jab ku tahay gorgortanka.
Diinta Neymar Ayaa Sharaxay:
Masiixiyiin run ah iyo 100% Ciise Masiix:
Neymar waa caqiido Ciise Masiix tan iyo yaraantiisii. Aad ayaan u jeclahay isticmaalka Baananka (100% Ciise).
Asal ahaan, Neymar waa Masiixi run ah oo ku shaqeynaya rumaysad. Wuxuu arkayaa Noloshu inay tahay wax macne u sameeya qof kasta marka uu isaga ama iyadu Ciise Masiix hortaagan wax kasta. Labadaba Gabriel Ciise iyo Edinson Cavani waxay la mid yihiin Ciise Jacaylka nolosha sida Neymar
Taariikh nololeedkii Neymar - Kac sheeko caan ah:
Neymar wuxuu ka mid noqday ciyaartoyda ugu fiican ee ka ciyaara Sao Paulo, Brazil ka hor inta uusan da'da 11. Dhaqdhaqaaqiisa iyo dabiiciga ah ee Brazil ee Samba ayaa ah inuu ka doorbidayaa xulashada kubadda cagta waddooyinka kaasoo ka dhigtay inuu u ciyaaro ciyaaraha muhiimka ah ee wadada.
Waxa uu helaa aqoon fiican oo ku saabsan xeebta iyo kubada cagta ee kubada cagta ee adag sababtoo ah xawaaraha, xirfadaha lafdhabarka iyo aragtida cajiibka ah ee lugaha bidix ee bidixda si ay kubada u leexiyaan goolasha fog fog. Tani waxa ay aragtay Neymar horumarinta kubadda cagta wadada si kubada cagta loogu ciyaaro garoonka dhexdiisa.
Neymar ayaa markii dambe la arkay isagoo raadinaya goolal ay ka heleen kooxda ka dhisan galbeedka, Real Madrid iyo kooxo kale oo diiday inuu u ciyaaro dalkiisa Santos halkaasoo uu ka ciyaari karo. 2011, waxaa loo soo bandhigay macalinka xulka Brazil Luiz Felipe.
Ugu dambeyntii wuxuu ku biiray Barcelona FC 27th May 2013 ee 57 Milyan Dollar. Afar sano ka dib, wuxuu PSG u saxiixay lacag rikoorka suuqa kala iibsiga $ 263 million. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Waad ku mahadsantahay akhrinta Neymar Sheekada dhalinyarada ee Neymar iyo xaqiiqooyinka taariikhda aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Taariikhda Kubadda Cagta ee Barcelona
latif Mee 25, 2019 At 10: 28 am
Neymar jr oo ka mid ah rikoodhada ka mid ah riwaayada iyo xayeysiinta ah ee ku xeeldheer xayeysiiska iyo ficilada ficilada ama ficilada ku habboon neymar
Sheekooyinka Fred Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadal
Casemiro Sheeko dheeri ah Xogta looyaqaano Weriyeyaasha